Gbasara Anyị - Xiamen Charmlite Co., Ltd.
Iko mmanya anaghị akwụ ụgwọ
Glass Ugboro abụọ
Dị na Xiamen, China, hiwere na 2004, Xiamen Charmlite Co., Ltd abụrụla otu n'ime ndị na-ebute ụzọ na onyinye na ụlọ ọrụ nkwalite yana ụlọ ọrụ na-a drinkụ mmanya na China.
Ndụ nwere ike ịdị mfe site na mmegharị Charmlite. Dịka onye na-eweta grafiki na otu ngwungwu na-eweta ngwungwu ngwungwu ngwakọ, Charmlite nwere ikike ịnweta ngwaahịa ọ bụla enwere ike ịnweta site na A ruo Z, nke nwere ike ịbụ maka nkwalite nwere njiri mara mma maka gị.
Site na ntọlite ​​ụlọ ọrụ enyemaka ya Funtime Plastics (Xiamen) Co., Ltd. na ụlọ arụmọrụ, Charmlite na-enye karịa nnyefe dị mma, ngwaahịa dị mma yana ọnụ ahịa asọmpi.
Dị ka ụlọ ọrụ nwere ọrụ, Charmlite achọlarị maka teknụzụ ọhụrụ na ihe akwụkwọ ndụ maka ngwaahịa anyị na-enye.
Akwụsịla imeziwanye ihe bụ ebumnuche nke ndị niile so na Charmlite.
Anyị na-atụ anya inyocha ezigbo ndị mmekọ dị ka gị.
Xiamen Charmlite Co., Ltd ewepụtawo ma weta onyinye nkwalite dị mma na ego ọfụma nye ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ụwa, dị ka Coke, Disney, SAB Miller, Bacardi na wdg kemgbe 2004.
Ugbu a anyị nwere nnukwu nchekwa data nke ngwaahịa dị ka akpa, karama mmanya, ihe elektrọnik, bọketị ice, ngwaahịa mpụga, ihe egwuregwu na ihe ndị ọzọ, nke ahụ dabara adaba maka nkwalite afọ nke afọ, mmalite ngwaahịa, mkpọsa ahịa, karịsịa na ihe ọ beụverageụ. na ulo oru mmanya. Ahụmịhe anyị bara ụba na ihe ọmụma banyere ngwaahịa enyerela anyị aka ịzụlite onyinye nkwalite na afọ ọma maka akara ndị ama ama na ụlọ ọrụ ụwa niile.
Charmlite nwere otu aka ọrụ, nwere afọ 15 na njikwa azụmaahịa mba ụwa.
Anyị ghọtara nke ọma na njikwa mma bụ ihe dị mkpa na mgbado anya ya. Ndị ọrụ 6 QC na-ahụ maka ọrụ mmepụta dị iche iche na-agagharị ịchọpụta ihe sitere na ngwaọrụ site na mbukota iji hụ na nnyefe oge na ngwaahịa dị mma.
Ebumnuche anyị bụ Chebe iche na azịza gị.
Charmlite nabatara mmekorita ọhụụ na ndị mmekọ esenidụt, ịzụta ndị ahịa na iduzi ndị ahịa.
Festime Plastics (Xiamen) Co., Ltd.
E guzobere Funtime Plastics (Xiamen) Co., Ltd. dị ka ụlọ ọrụ enyemaka nke Charmlite na 2013 iji rụpụta ọrụ pụrụ iche na ịkpụzi na imepụta iko yabasị plastik, iko slush na tumblers na ụlọ ọrụ ntụrụndụ yana ọrụ nri ọdịnala na ụlọ ọrụ na-a drinụ mmanya.
Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ihe karịrị otu narị ụdị iko roba na-enweghị ọ plasticụ plasticụ plastik, gụnyere iko slush, yaad nke ale, akpụkpọ ụkwụ biya das, na LED na-egbu maramara nke nwere ọrụ. Anyị na-enye iko site na nha 8OZ ruo 100OZ, kwekọrọ na agba PMS. Ngwaahịa anyị ama ama nke ukwuu n’etiti ndị ahịa ma na-enweta nnukwu ihe ịga nke ọma n’ahịa, ọ kachasị na Carnivals, Daiquiri Bars, ụlọ ọrụ Universal, ogige ntụrụndụ mmiri, ogige ezumike na ebe ntụrụndụ ndị ọzọ n’ụwa niile.
Igwe igwe iri anọ na asaa, tinyere igwe inyinya, ndị na-apụ apụ, igwe na-eme mkpọtụ na igwe eji ama akara aka dị elu na-achọpụta ngwaahịa dị mma na 99.9% zitere anyị oge. Lineslọ anyị na-akpụzi n’ime ụlọ dị njikere maka ihe ọ bụla na-ezughị ezu ma na-emezu echiche gị zuru oke maka izu-oke.
Plastik oge na-ahụ mkpa nke ihe ndị ọzọ na-eme gburugburu ebe obibi. N'otu ụzọ, anyị mepụtara iko mmanya a na-ejighajigharị, friza na mpi. N’uzo ozo, anyi n’acho iji teknụzụ ọhụụ na-eji PLA na ihe ndị ọzọ eji eme ihe maka imepụta iko na iko. Anyị nọ ebe ahụ!
Ebumnuche anyị bụ ka ị bụrụ onye na-eweta ihe ịwareụ ihe ọwareụwareụ otu ụzọ.
Ebumnuche anyị bụ ka anyị nye iko mara mma ma meziwanye ndụ ndụ.
Na-ele anya ịme ngwaahịa na-aga nke ọma.
Funtime nwere Disney FAMA, BSCI, audlin audits, wdg. A na-emelite audits a kwa afọ. N'okpuru ebe a bụ foto ụfọdụ asambodo.
Nkeji 1421 & 1422, Buynow Tech. Bldg, No.76 South Hubin Rd, Xiamen, China 361004